Times24 Nepal » स्वास्थ्य
‘दाल भात तरकारी’को धमाकेदार शीर्ष गीत सार्वजनिक, आँचलको नयाँ अवतार !
५ चैत्र २०७५, मंगलवार १५:२६
काठमाडौं, चैत ५ बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दाल भात तरकारी’को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच सो फिल्मको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त गीतमा संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटाको संगीत रहेको छ । गीत भने हरिवंश आचार्यले लेखेका हुन् । गीत राजेश पायल राई र स्मिता दाहालले गाएका हुन् ।.....
के तपाईंको ढाड दुख्ने समस्या छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १६:४५
व्यस्त जीवनशैली, खानपिन, बसाइ नमिल्नु आदि कारणले पछिल्लो समय धेरै मानिसमा ढाड दुख्ने समस्या बढ्दो छ । अस्पतालमा सानो बच्चादेखि वृद्ध उमेरसम्मका मानिस ढाडको समस्या लिएर पुग्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि युवा पुस्ताका मानिसमा मेकानिकल ब्याकपेन देखिने गरेको छ । यहाँ ढाड के कारणले दुख्छ भनेर चर्चा गरिएको छ । बसेर.....
यस्ता छन् तपाईं–हामीलाई थाहा नभएका अमलाका अपत्यारियला फाइदाहरू !
२९ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३१
सामान्यतः अमला भिटामिनयुक्त वनस्पतिमा पर्छ । यसलाई बहुगुणी वनस्पति मानिन्छ । अमलालाई भिटामिन ‘सी’ को त खानी नै मानिन्छ । अमला नियमित खानाले आँखाको ज्योति बढ्ने मात्रै नभएर दिमागसमेत तेज बनाउँछ । यहाँ अमला खाँदाका फाइदबारे चर्चा गरिएको छ । – अमलामा पानीको मात्रा हुन्छ, जसले पिसाबसम्बन्धी समस्या हटाउन.....
यस्ता छन् रायो साग खाँदाका अचाक्ली फाइदाहरू !
२७ माघ २०७५, आईतवार ०९:०९
सामान्यतः हरिया सागपात सबैजसो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छन् । त्यसमा पनि रायो सागको फाइदा झनै बढी हुन्छ । हामीले सजिलै रोप्न र भान्सामा तरकारीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने रायो सागको फाइदाबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ – रायोको सागमा पाइन्ने भिटामिन ‘ए’, ‘सी’ र ‘के’ युक्त तत्त्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको.....
यस्ता छन् अदुवा–चिया पिउनुका फाइदा
२५ माघ २०७५, शुक्रबार १७:००
सामान्यतः अदुवा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । त्यसमा पनि चियामा अदुवा झन् विशेष हुने भइहाल्यो । अदुवा हालेको चिया पिउने बानी स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ – अदुवामा पाइने भिटामिन, खनिज र एमिनो एसिडले रक्तसञ्चार राम्रो बनाउँछ । हृदयाघात र मुटुरोगीका लागि पनि अदुवा निकै फाइदाजनक मानिन्छ.....
गर्भ रहेको कसरी थाहा पाउने ?
१७ माघ २०७५, बिहीबार १४:१९
दैनिक जीवनमा कतिपय जोडी वा महिला शारीरिक सम्पर्कपछि गर्भ रहे–नरहेको थाहा पाउन नसक्दा चिन्तित हुन्छन् । तर, यो थाहा पाउन सजिलै सकिन्छ । यसका लागि उति धेरै समय र खर्च पनि लाग्दैन । अक्सर प्राकृतिक तरिकाबाटै यो थाहा पाउन सकिन्छ । तर, मासिक समयभन्दा अगावै गर्भ रहे–नरहेको थाहा पाउन पनि सकिन्छ । यहाँ यसबारे.....